HTC ga-emelite Nougat na HTC 10, Otu M9 na Otu A9 na Q4 | Gam akporosis
Nyaahụ anyị zutere sony ngwaọrụ ihe ga-abụ emelitere na gam akporo 7.0 Nougat. N'ime ha anyị ahụta ya ihe dị iche ịghara ịchọta Xperia Z3, ọnụ ọnụ nke na-emezughị ọnwa 24 kemgbe mmalite ya na nke na-anọghị na Nougat; Ọ dịkwa ịtụnanya na ọ bụ njedebe nke Sony jiri nwalee gam akporo N ...
Mgbe Google bidoro Nougat ụbọchị abụọ gara aga, ugbu a ọ bụ oge maka ndị nrụpụta ndị ọzọ sonyere Sony iji kwupụta oge a kara aka maka mbata nke gam akporo 7.0 a. HTC ejiriwo akaụntụ Twitter gị gosi mmelite Nougat usoro ngwaọrụ gị yana ụbọchị ruru.
Anyị ga-echeta na HTC nwere 90 ụbọchị ikike, nke n'oge ahụ ụlọ ọrụ ahụ ga-elekwasị anya iji bido ụdị sọftụwia ọhụrụ ahụ na ngwaọrụ ya kachasị mma, na nke a ọ bụ HTC 10. Naanị ihe na-eme abụghị ka ekwuru, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-eme O mezuru ya na ndị ọzọ enwebeghị, n'ihi nsogbu nke mpaghara ahụ, ndị ọrụ na ihe ndị ọzọ ọtụtụ n'ime gị maara.
Obi dị anyị ụtọ ịnata mbupu ikpeazụ gam akporo 7.0 Nougat sọftụwia sitere na Google! pic.twitter.com/BNbQBpgddK
HTC ekwenyeghị ụbọchị akọwapụtara maka mmelite nke mmelite ndị ahụ, mana etinyela Nkeji iri na ise n'afọ maka mbata nke Android Nougat na HTC 10, HTC One M9 na HTC One A9. Naanị ọnụ ahịa ndị a ka ekwuru, yabụ anyị nwere ike iche na ndị ọzọ ga-esochi ma emechaa.
Ka anyị nwee olileanya, ọkachasị ebe HTC 10 bụ otu n'ime smartphones nke Agaghị m enwe ọtụtụ bloatware ahụ ọ ga-adịkwa nso na nke dị ọcha karịa gam akporo, nke kwesịrị ịgbalite usoro nke ijikọta atụmatụ ndị ahụ niile Nougat wetara. Ma ọ dịkarịa ala, ndị na-emepụta Taiwan kwuru ihe dị nso na ụbọchị, Sony ọbụnadị nke ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC kwadoro ụbọchị maka mmelite gam akporo Nougat
PayPal akwadoro ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na gam akporo
Pokémon GO na-emetụ ụlọ elu ma ugbu a ọ na-amalite nkwụsị mgbe niile na ndị ọrụ na nbudata